successful Archives - Page3of 11 - Thutazone
ရေးသားသူ - ဗန်းဖော်သိန်းဖေ လက်မအရွယ်ရှိတဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲလေးတလုံးနဲ့ အရွယ်တူရွှေတုံးလေးတတုံးကို ရောင်းရင် ဘယ်ဟာကို ပိုက်ဆံပေးဝယ်ကြမလဲ။ ကျောက်ခဲအစား ရွှေတုံးလေးကိုပဲ ဝယ်မယ်ဆိုတာ ပြောပြစရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒါဖြင့် ကျောက်ခဲနဲ့ရွှေတုံးဟာ အရွယ်တူ အလေးချိန်သိပ်မကွာပဲ ဘာဖြစ်လို့ ရွှေတုံးကိုကျတော့ ...
လူတိုင်းသည် ကိုယ့်ဘဝကို အောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းမအောင်မြင်ကြဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်အရင်သိအောင်မလုပ်ကြဘူး၊ ကိုယ့်နဲ့သင့်တော်တဲ့အလုပ်၊ ကိုယ်ရရှိတဲ့ဝင် ငွေကိုလည်း မချိန်တွယ်မစဉ်းစားတတ်ဘူး။ အောင်မြင်လိုလျင်အချက်(၄)ချက်ကို အရင်ကြည့်ရအောင်။ (၁) စဉ်းစားပါ-- ဘာကိုစဉ်းစားရမှာလဲ ? အခုငါဘယ်ဘဝရောက်နေတာလဲ ? အခုငါသုံးနေတဲ့ငွေဟာ ...
လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်ခန့်က ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် စာရေးဆရာ ပေါက်စဘဝ။ ဝင်ငွေ မသေချာ သေးသည့် အချိန်။တစ်နေ့ မှာတော့ လက်ရှိ ဘဝပြဿနာကို အလေးအနက် စဉ်းစား အဖြေရှာ တော့မည် ရည်ရွယ်ကာ တိတ်ဆိတ်သည့် ...
ဆင်ဆိုတဲ့ သတ္တဝါက တစ်တန်လေးတဲ့ပစ္စည်းကို နှာမောင်းနဲ့ အသာလေး မချီနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဆပ်ကပ်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်တဲ့ဆင်က တိုင်တစ်တိုင်အောက်မှာ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ချည်နှောင်ခံခဲ့ရတယ်။ အကြောင်းက ဆင်တွေဟာ ငယ်စဉ်ခွန်အား မရှိခင်ကတည်းက ကြီးလေးတဲ့သံကြိုးတွေနဲ့ ချည်နှောင်ခံခဲ့ရတယ်။ စစချင်းမှာ ဆင်ငယ်က ရှိသမျှခွန်အားနဲ့ ရုန်းခဲ့ပေမယ့် ...
By Mon Pharmacy ငယ်ရွယ်စဉ်အခါ တန်ဖိုးထားသင်ယူအသုံးချရမယ့် ဘဝသင်ခန်းစာအမြောက်အမြားရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကအဖြစ်အပျက်များကို အတွေ့အကြုံယူပြီး အကျိုးရှိစွာ ပြန်လည်သုံးသပ်သင်ခန်းစာယူပါ။ စောလျင်စွာလေ့လာသင်ယူသင့်တဲ့ တချို့သောဘဝသင်ခန်းစာများကတော့ ၁။ ပိုက်ဆံကသင့်ရဲ့ပြသနာများကို ဘယ်သောအခါမှအမှန်တကယ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ ပိုက်ဆံက သင်ရဲ့လိုအပ်ချက်များနဲ့ လိုချင်တပ်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတချို့တွေကို ဝယ်နိုင်တဲ့ရောင်းကုန်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ...
ရေးသားသူ - ရွှေညာမောင် (Focus Youth E-magazine) ပုရွက်ဆိတ်တွေကို သတိထားပြီး စောင့်ကြည့်ဖူးရဲ့လား? ပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်ဟာ သူ့သွားရာလမ်းမှာ အစိုင်အခဲ၊ အတားအဆီးတစ်ခုခုရှိလို့ နောက်ပြန်လှည့်သွားတယ်ဆိုတာ မြင်ဖူးရဲ့လား? (ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်မလှည့်ပါဘူး) နောက်ပြီးတော့ ပုရွတ်ဆိတ်တွေဟာ ဆောင်းတွင်းကာလမှာ စားသောက်ဖို့အတွက် ...